ဇာဂနာနဲ့ ဖား၊ ငါး အဖြေ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဇာဂနာနဲ့ ဖား၊ ငါး အဖြေ	Posted by mm thinker on June 7, 2008
Posted in: Nargis.	Tagged: Nargis.	မေး။ ။ တနေ့က မြန်မာ့အလင်းမှာ လူတွေကို ဖားရှာ၊ ငါးရှာစား … နောက်နှစ်ဆို ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ စပါးတွေ ရွှေရောင်းသမ်းပြီးတော့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းနဲ့ စည်ပင်တော့မယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲဒါ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ခင်ဗျ။ဖြေ။ ။ အဲဒီအိပ်မက်ကလေး ကောင်းသားပဲလို့ ကျနော်ပြောချင်တယ် … ဟဲ ဟဲ ဟဲ … ဖားရှာ၊ ငါးရှာ ရှာလို့ ရမလားတော့ မသိဘူး … ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနဲ့ ဘိုကလေးမြစ်ဆိုရင် ရေအရောင်ကို နာမည်ပေးထားတယ်၊ နာဂစ်ကာလာလို့။ ဘာလဲဆိုတော့ ဖြူဖြဲဖြဲ အရောင်ကြီး၊ အဲဒီအရောင်ကြီးနဲ့ လူနဲ့ ကျွဲ နွားအလောင်းတွေက အများကြီး … နာဂစ်ရနံ့ ဆိုတာရှိသေးတယ် … အဲဒီညှီနံ့ကြီးက ပြန်လာရင် ပါလာတာပဲ၊ ဘယ်သူမှ မခံနိုင်ဘူး အန်တယ်။ ဒီတော့ အဲဒီလို နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ငါးရှာ၊ ဖားရှာမှာလဲဗျာ … ငါးဖမ်းမယ့်အစား အလောင်းတွေ ဖဲ့စားမှ ရတော့မယ်။